एमालेद्वारा विद्वत सभाको आयोजना | Mechikali Daily
एमालेद्वारा विद्वत सभाको आयोजना
Posted By: Mechi Kalion: १५ चैत्र २०७३, मंगलवार ०४:५५
काठमाडौं, । हरेक कार्यक्रममा उखान–तुुक्का मिलाएर सबैलाई हसाउने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सोमबार भने निकै भद्र शैलीमा प्रस्तुत भएका थिए । सिंहदरबारमा नेपालका लागि नवनियुक्त भारतीय राजदूत मञ्जीभसिंह पुरीसँग करिब एक घण्टा विताएपछि सिधै ललितपुरको होटल हिमालयमा आयोजित विद्वतसभामा पुगेका ओलीले त्यहाँ २० मिनेट भन्दा बढी मन्तव्य राखे ।
एमालेका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल सहित विज्ञहरुलाई वरिपरी राखेर ओलीले समृद्धिको सपना सुनाएका थिए । ओलीले आफ्नो मन्तव्यको सबै समय आर्थिक सम्वृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ ? भन्ने विषयमै खर्च गरे । विद्वत वर्गका कुरा सुन्ने हिसावले आयोजना गरेको कार्यक्रममा ओलीले पहिला–पहिला जस्तो वौद्धिक समूदायको आलोचना समेत गरेनन् ।
बरु उनले विकास र समृद्धिवारे गहन ढंगले छलफल गर्ने एमालेको पनि उद्धेश्य रहेको भन्दै अब अधिकार अधिकार मात्रै भनेर नहुने बताए । ‘समृद्धि कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यतातिर लाग्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘हामीले लोकतन्त्रलाई कति सदुपयोग गर्न जानेका छौं, गणतन्त्रलाई कति सदुपयोग गर्न जानेका छौं ? यसले धेरै कुरा हाम्रो प्रगति निर्भर गर्छ । जनताको हातमा सार्वभौमसत्ता हाम्रो मुख्य आधार हुनुपर्छ । त्यसको प्रयोग कसरी सबैभन्दा बढी ब्यवहारिक हुन्छ ? त्यतातिर लाग्नु पर्छ ।’
उनले संविधान जारी भइसकेको भन्दै त्यसलाई संस्थागत गरेर कसरी विकास र समृद्धिमा लगाउने भन्ने बारेमा सोच्नु पर्नेमा पनि जोड दिए । ‘संक्रमणकाल संबैधानिक र राजनीतिक हिसावले पनि लम्याउन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘जति लम्बिन्छ त्यति अन्यौलता र जनतामा निराशा बढ्छ । त्यति नै स्वार्थी तत्वहरु सक्रिय हुनेछन् । निर्वाचन गर्नुपर्छ । तर लोकतन्त्रमा निर्वाचन सशर्त हुँदैन ।’
उनले यसो भएन भने त्यसो भएन भने निर्वाचन हुँदैन भन्न नहुने भन्दै जिम्मेवार पार्टी र व्यक्तिहरुलेनै निर्वाचनका लागि सर्त राखेको सुन्दा अचम्म लागेको उल्लेख गरे ।
‘दुईचारजनाको सर्तमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अवरोध हुने हास्यास्पद कुरा भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले ०७४ सालभित्र तीनवटा तहका निर्वाचन हुनुपर्छ । हाम्रो बौद्धिक समुदायले अब अधिकारका कुरा मात्रै होइन समृद्धिका प्रश्नहरुमा ध्यान दिनुपर्छ ।’ उनले लोकतन्त्र, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, र देशलाई सामाजिक सद्भावमा लैजान एमाले आफ्नो स्वार्थको घेरा भन्दा माथि रहेको पनि उनले उल्लेख गरे । कार्यक्रममा ३५ जना वौद्धिक व्यक्तिहरुले आफ्ना भनाइ राखेका थिए ।
दुनियाँ कामले बदलियो, हामी पनि ढिलो नगरौं–ओली
विद्वत वर्गका कुरा सुन्ने हिसावले यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । विकास र समृद्धिवारे गहन ढंगले छलफल गर्ने हाम्रो उद्धेश्य हो । हाम्रा समस्या के हुन् ? तिनलाई कसरी हटाउने ? आवश्यकता के हुन् ? तिनलाई कसरी प्राप्त गर्ने ? यस विषयमा हामीले निक्र्याैल गर्नु छ । अव अधिकार अधिकार मात्रै भनेर हुँदैन । समृद्धि कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यतातिर लाग्नु पर्छ ।
हामीले लोकतन्त्रलाई कति सदुपयोग गर्न जानेका छौं, गणतन्त्रलाई कति सदुपयोग गर्न जानेका छौं ? यसले धेरै कुरा हाम्रो प्रगति निर्भर गर्छ । जनताको हातमा सार्वभौमसत्ता हाम्रो मुख्य आधार हुनु पर्छ । त्यसको प्रयोग कसरी सबैभन्दा बढी ब्यवहारिक हुन्छ ? त्यतातिर लाग्नु पर्छ ।
संविधान जारी भइसक्यो । त्यसलाई संस्थागत गरेर कसरी विकास र समृद्धिमा लगाउने । संक्रमणकाल संबैधानिक र राजनीतिक हिसावले पनि लम्याउन मिल्दैन । जति लम्बिन्छ त्यति अन्यौलता र जनतामा निराशा बढ्छ । त्यति नै स्वार्थी तत्वहरु सक्रिय हुनेछन् । निर्वाचन गर्नु पर्छ । तर लोकतन्त्रमा निर्वाचन सशर्त हुँदैन । यसो भएन भने निर्वाचन हुँदैन भन्न हुँदैन । त्यसो भएन भने कहिलेसम्म निर्वाचन हुँदैन ? आज म जिम्मेवार पार्टी र ब्यक्तिहरुले नै निर्वाचनका लागि सर्त राखेको सुनिरहेको छु । दुईचारजनाको सर्तमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अवरोध हुने हास्यास्पद कुरा भइरहेको छ । हामीले ०७४ सालभित्र तीनवटा तहका निर्वाचन हुनु पर्छ ।
हाम्रो बौद्धिक समुदायले अव अधिकारका कुरा मात्रै होइन समृद्धिका प्रश्नहरुमा ध्यान दिनु पर्छ । अव विकासका निम्त आधार तयार गरेर अघि बढाउनु पर्छ । ती आधारलाई कसरी अघि बढाउने ? हामीले कस्तो देश बनाउन चाहेका हौं ? एमाले दलीय स्वार्थ भन्दा माथि उठ्छ । लोकतन्त्र, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, र देशलाई सामाजिक सद्भावमा लैजान एमाले आफ्नो स्वार्थको घेरामा आफूलाई सिमित राख्दैन । हामी देशलाई समृद्धिमा लैजान चाहन्छौं ।
हामीले अव कुन कुन क्षेत्रमा कसरी काम गर्ने ? पूर्वाधारहरु बनाउनु छ । ऊर्जाका क्षेत्रमा काम गर्नु छ । सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा प्रगति गर्नु छ । भर्खरै डा युवराज खतिवडाले उहाँको साथमा कापी कलम छैन भन्नु भो । धेरै अघिदेखि उहाँले कलम बोक्नु भएको छैन । अर्थात् दुनियाँ बदलिंदैछ । दुनियाँ नै इन्टरनेट र विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा जाँदैछ । पेपरलेस अफिस बन्दैछन् । पेपरलेस मनीको दिशामा पनि मुलुक जाँदैछ । हामीले सबै क्षेत्रमा कस्तो विकास गर्नु पर्छ ? शिक्षामा के गर्नु पर्छ ? यो यो क्षेत्रमा यो यो गर्नु पर्यो भनेर योजना बनाउन ढिलो भइसक्यो ।
विकासमा हाम्रो सम्भावना के हो ? हाम्रो जनशक्तिलाई उत्पादनमा कसरी लगाउन सकिन्छ ? उत्पादनका क्षेत्रहरु तोकेर कसरी काम अघि बढाउन सकिन्छ ? हामीले तयारी गर्नु छ । हामीले गतवर्ष आत्मनिर्भरतामा कसरी अघि बढ्ने भन्ने केही कार्यक्रम ल्यायौं । खाद्यान्नको आत्मनिर्भरताको योजना अघि सारेका थियौं । हाम्रो वैदेशिक ब्यापार घाटामा छ । आत्मनिर्भर बनाएर हामीले निर्यात गर्न सक्यौं भने वैदेशिक ब्यापार सन्तुलन कायम गर्न सक्छौं ।
विकासका धेरै कुरा हाम्रो आत्मनिर्भरतामा निर्भर छन् । तर, सबै कुरामा आत्मनिर्भर नै हुन सकिन्छ भन्ने छैन । केही कुरा यहाँ नहोलान् । तर, हामीले प्रयास गर्दा आत्मनिर्भर हुन सकिने कुरा धेरै छन् । कृषि आधारित जनसंख्यालाई कृषिको आधुनिकीकरणले कृषि उद्योगमा बदल्न सक्छौं । त्यसले रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ ।
यहाँ छिमेक सम्बन्धका बारेमा चर्चा चल्ने गर्छ । वैदेशिक मामिलाका बारेमा चर्चा चल्छ । मैले नेतृत्व गरेको सरकार ढाल्ने बेलामा शब्दकोष शब्दको अर्थ नै अर्काे लाग्नेगरी सन्तुलित विदेश नीतिको ब्याख्या गरियो । त्यसबेलाको विदेश नीति असन्तुलित भनियो र अहिलेको सम्बन्धलाई ‘सन्तुलित’ भनिंदैछ । खैर यो सबैले देखेको र बुझेको कुरा हो । हामी भूपरिवेष्ठित देशका नागरिक हौं, हामी बाटो लिन जता पनि जान सक्छौं । दुनियाँसँगको कनेक्टीभिटी रोडको, ऊर्जाको, इन्टरनेटको कसरी सञ्चालन गर्न सक्छौं ?
विकासका लागि नेपालको भूगोल असाधारण अनुकुल छ । उर्भरता, खानी, हिमताल, नदिनाला, तराई, पहाड सबै कुरा हाम्रो उत्पादनका अनुकुल हुन् । अव यसलाई समृद्धिका लागि कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ ? योजना बनाउनु पर्यो । अधिकार अधिकार मात्रै भनेर अव हुँदैन, उत्पादन र समृद्धि चाहियो । खाद्यान्न अव बाहिरबाट किन ल्याउनु पर्यो ? मासु हामीले किन बाहिरबाट ल्याउनु पर्यो ? हामीले काम गर्यौं भने आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं । समृद्धिका लागि काम गर्नु पर्छ । खान मात्रै त केही नगरे पनि पुग्छ । मैले पोहोर प्रधानमन्त्री हुँदा भनेको थिएँ । खान मात्रै त केही गर्नु पर्दैन, सरकारले सबैलाई पाल्छ । म त्यो घोषणा गर्ने तयारमिा थिएँ तर, भ्याइएन । खान मात्रै हो भने त सरकारले ख्वाइदिन्छ नागरिकलाई । तर, हामीलाई खान पाएर मात्रै पुग्दैन । प्रगति गर्नु छ । त्यो प्रगति कसरी गर्ने हामी छलफल गरौं । हामी हाम्रो पार्टीको घोषणा पत्र बनाउन खोजिरहेका छैनौं । देश बनाउनु त हाम्रो अभिभारा हो । त्यसका लागि हामीले गरिवी निवारण गरेर समृद्ध र आकर्षक देश बनाउनु छ त्यो त गर्नु पर्यो नि । कम्तिमा अवको २५ वर्ष भित्र हामी देशलाई कस्तो बनाउन सक्छौं अव कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्नु पर्छ ।